Wasaarada Haweenka ” Waa in la xaqiijiyaa qoondada Haweenka” | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	Wasaarada Haweenka ” Waa in la xaqiijiyaa qoondada Haweenka”
yadoo shalay Ra’iiusul Wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke uu la kulmay Qaar ka mid Haweenka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii ay ku heli lhaayeen Haweenka Qoondada ay ku leeyihiin Dowladda cusub.
Wasiirka Haweenka Xukuumada Soomaaliya Marwo Sahra Maxamed Cali Samatar ayaa sheegtay in muhiim ay tahay Haweenka in ay helaan Qoondada ay ku leeyihiin Dowladda soo socota, si ay u soo bandhigaan waxqabadkooda.
Waxa ay sheegtay Go’aanka ugu dambeeya ee ku aadan Qoondada Haweenka in lagu go’aamin doono shirka Madasha Wadatashiga Qaran ee Bisha September ka furmi doona magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u sheegay in Haweenka Soomaaliyeed ay heli doonaan Qoondada ay ku leeyhiin Dowladda cusub, hadii mida ay dhici weydana ay heli doonaan meel u dhow Qoondadooda ah Boqolkiiba Soddon.
Wasaarada Haweenka ” Waa in la xaqiijiyaa qoondada Haweenka” was last modified: August 29th, 2016 by Siid Cali
Dowladda oo ka hadashay fatahaada wabiga Shabeelle
Dhageyso:- Waraysi Aanu La Yeelanay Gudoobiyahay Tiyeegloow Magaalo u Dhahayso Tiyeegloow iyo eel Garas dagaal ku dhax Maray shabaab iyo doowlada,